Jereo 5 amin'ireo tanàna frantsay mahafinaritra indrindra. Bezzia
Susana Garcia | 07/04/2021 10:00 | Lifestyle, Tsangatsangana
Firenena feno zoro mahafinaritra i Frantsa. Manana fomba ny tanànany ary tianay i Paris na i Bordeaux, saingy azo atao ny mihoatra azy ireo mitadiava vohitra frantsay mahavariana izay maka aina. Indraindray tsy maintsy miala amin'ny tanàna ianao mba hahitanao ireo toerana mahavariana indrindra manana ny toetranao indrindra.
En France dia misy tanàna tsara tarehy maro, saingy anio dia hiresaka momba ny dimy amin'izy ireo isika. Raha tianao ireo karazana fitsidihana ireo dia soraty izy rehetra satria samy manana zavatra mahaliana ny tsirairay. Ankafizo àry ireo teboka fitsidihana vaovao izay tsy maintsy ataonao any Frantsa.
Ity tanàna ity dia ao amin'ny departemantan'ny Lot ary misy fitsidihana maro, ao ambadiky ny Mont Saint-Michel. Amin'ity faritra ity dia efa nisy ny fisian'olombelona tao amin'ny Paleolithic ambony, satria manana ny Cueva de las Maravillas, lava-bato misy hosodoko lava-bato taloha. Tanàna nahavita namily an'i Camino de Santiago izy ary mpizahatany izao ankehitriny izao. Ny iray amin'ireo fitsidihana lehibe an'ity faritra ity dia ny trano mimanda, izay ahitanao ny hantsana sy ny fomba fijerin'ny sisa tanàna. Midina mijery ny tanàna azonao atao mandehana amin'ny Camino de la Cruz na amin'ny funicular ambanin'ny tany. Puerta de San Marcial tamin'ny taonjato faha-XNUMX dia manome fitoerana masina sy kianja masina mahafinaritra. Ary tsy tokony halahelo ny fiangonan'i San Amador tamin'ny taonjato faha-XNUMX ianao.
Ity toerana ity, izay efa nonina tamin'ny taonjato faha-XNUMX talohan'i JK, dia manolotra trano mimanda tsy mampino izay tsy mamela olona tsy hiraharaha. Ity trano mimanda antonony ity izay any atsimo atsinanana dia manintona antsika tsara. Aleo mitsidika azy amin'ny vanim-potoana ambany mba tsy hampiharihary tena amin'ny fizahan-tany be loatra. ny manana rindrina mihoatra ny telo kilometatra ny trano mimanda miaraka amin'ny vala ivelany sy anatiny ary eo amin'izy ireo ny lizas, tany malalaka izay manodidina ny trano mimanda. Ao amin'ny trano mimanda dia misy tilikambo maro, vavahady toa ny vavahady Narbonne, izay matetika no vavahady fidirana, ary na dia ny trano mimanda aza. Tokony ho hitantsika ihany koa ny Basilica Saint-Nazaire, miaraka amina singa Romanesque sasany fa ny fijery Gothic tanteraka.
Ity tanàna ity dia miorina eo amin'ny Camino de Santiago any atsimon'i Frantsa. Ao amin'ny Conques dia mila mankafy fitsangatsanganana an-dalambe ianao, mahita ny firafitry ny tranony, miaraka amin'ny zana-kazo sy vatofisaka amin'ny tampon-trano. Ny tsangambato lehibe ao an-tanàna dia ny Abbey an'ny Conques an'ny Romanesque miavaka amin'izany ny Portico amin'ny Fitsarana Farany. Ao anatin'izany dia azonao atao koa ny mahita ny Tranombakoky ny Tranombakoka miaraka amina relizionaire. Tsy hadino koa ireo toerana iasan'ny mpanao asa tanana sy ireo magazay kely ao an-tanàna.
Izany dia noheverina ho tanàna tsara indrindra any Alsace. Izy io dia manana endrika boribory hafakely ho an'ny tanjona ara-barotra. Manodidina ny dimy kilometatra miala eo dia misy fomba fijery mankasitraka ity endrika tanàna ity. Mila mitsidika ny Rue du Rempant ianao satria io no lalana ahitantsika ny tena votoatin'ny maritrano ao an-tanàna. Ity koa ny faritra be sary indrindra eto an-tanàna, ny trano Le Pigeonnier izay eo an-joron-trano ary manasaraka arabe roa. Tsy maintsy jerentsika ihany koa ny Place du Chateau, ilay kianja manan-danja indrindra ao an-tanàna miaraka amin'ilay Fontana de Saint Leon tsara tarehy eo afovoany.
Ity dia iray amin'ireo tanàna manintona izay tsy tokony halainao. Raha miditra amin'ny Rue Grande no ahitanao ny Place de la Grande Fontaine izay ny kianja taloha. Ao ambadik'izany ny Kianjan'ny Fiangonana, miaraka amin'ny Fiangonan'ny fiovam-pinoan'i Saint Paul. Any amin'ny faritra atsimo dia misy fomba fijery miorina ambonin'ny fasana, toerana manome ny fomba fijery tsara indrindra an'ny tanàna iray manontolo.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Bezzia » Lifestyle » Tanàna 5 any Frantsa tianao hipetrahana